Ny satroka mpampitohy dia manampy fiarovana IP67 - Micro-Semiconductor.com
Ny satroka dia nomena isa IP67 ary manampy amin'ny fisorohana ny fananganana hamandoana, vovoka ary loto ao amin'ny endrika fampakaram-bady.
Noho ny famolavolana ny tombo-kase fifandraisana anatiny, ny mpampifandray Nautilus dia efa voaisy tombo-kase tsy miforitra amin'ny IP68. "Ny satroka dia hanome fiadanan-tsaina bebe kokoa amin'ireo fifandraisana sisa tavela amin'ny tontolo masiaka", hoy ny orinasa. "Ny rindranasa toy ny fitaovana mora entina ivelany izay mitaky ny fanaovana rohy sy tapaka tsy tapaka dia afaka mahazo tombony amin'ny satroka rehefa tsy ampiasaina ny antena hanakanana ny fanangonana vovoka sy loto rehefa eny an-tsaha."
Ireo satroka dia mahavita tombo-kase IP67 miaraka amin'ny kinova SMA (aoriana aoriana), N-Type ary TNC an'ny faritra Nautilus - ary safidy koa izy ireo ho toy ny vovoka ho an'ny tsy mpifaninana nautilus amin'ireo karazana mpampifandray ireo.
Ny satroka firaka varahina dia vita amin'ny plastika nikela (N sy TNC) na ny firavaka volamena (SMA) ary misy na tsy misy rojo miraikitra.
Ny orinasa dia manolotra tatitra fanandramana hampiasaina miaraka amin'ireo loharanom-pahalalana sy sary hafa momba ny poduct.
Eto ny pejy momba ny vokatra
Ny kapila mpampifandray Nautilus dia azo alaina avy amin'ny Digi-Key
Ny GradConn any Taiwan dia manao mpampifandray karatra SIM sy fivorian'ny tariby coaxial, ary koa ireo mpampitohy amin'ny birao hatramin'ny 1.00 ka hatramin'ny 5.08mm ary ireo mpampifandray amin'ny tariby 0,8, 1 & 1.2mm. Manamboatra any Shina sy Taiwan any amin'ireo fotodrafitrasa nohamarinina ho an'ny ISO9001: 2015 sy ISO14001: 2004.